Isitshalo semifino | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Isitshalo semifino
Indlela yokutshala utamatisi engadini yakho
Kungakhathaliseki ukuthi imifino nezithelo ezinhle zibukeka kanjani emashalofini ezitolo, imikhiqizo ekhuliswe ngezandla zayo iyoba yindawo ekhangayo kakhulu. Ngempela, uyazi ukuthi izithelo azange zibe ngaphansi kwanoma yiluphi uhlobo lwezokwelapha zamakhemikhali futhi azifakwanga ngamakhemikhali. Ngakho-ke, uma ufuna ukukhula, isibonelo, utamatisi engadini yakho, khona-ke ngeke kube yinto esidla isikhathi.
"Izakhamuzi" zaseNyakatho: ukhukhamba eSiberia
Ngaphambi kokuthenga enye iphakheji ngembewu ehlosiwe yamakhukhamba, udinga ukutadisha ngokucophelela izakhiwo ezithile ezihlukahlukene. Phela, akuzona zonke izihlahla ezizokwazi ukubhekana nesimo sezulu esingathandeki saseSiberia. Ngokuqondene namakhukhamba, lesi siko sithanda ukukhanya nokushisa kakhulu. Kodwa ukuzala okwakusimanje kuye kwagijimela phambili ukuthi inqwaba yezinhlobonhlobo zalolu mmeli womndeni wempuphu idalwe, engakwazi ukumelana nanoma yiziphi izinguquko ezimweni zesimo sezulu ngisho nasendaweni efana neSiberia.
Isimangaliso sezilwandle: izinhlobo zekhukhamba zamaShayina
Uma uke wabhekana namakhukhamba, okungukuthi, ukufuna izinhlobo ezifanele ezihlotsheni zakho, khona-ke mhlawumbe uthola inkulumo ethi "ikhukhamba yamaShayina". Lokhu akuyona imilayezo eyodwa ethize, yi-subspecies yonke, izithelo zazo ezinezici ezimbili, okungukuthi, isimo samafancy kanye nobude obuhlaba umxhwele obungama-50 kuya ku-80 cm.
Amakhukhamba e-Bunch: ukuthi iyini nokuthi yini edliwe nayo
Abalimi abanolwazi nabalimi abaye bahlakulela ukhukhamba iminyaka eminingana ngokuqinisekile bayazibona ukhukhamba. Igama laleli qembu lezinhlobonhlobo livele ngenxa yesici esiyinhloko salokhu ukhukhamba. Futhi lesi sici yikhono lezitshalo zokwenza inothi elilodwa ngaphezu kweyodwa noma amabili ama-ovari ngesikhathi esisodwa.
I-Ural Zelentsy: amakhokhamba angcono ama-Urals
Okwamanje, inqwaba yezinkukhu ezihlukene zekhukhamba, ummeli womndeni weqabunga, uye wadalwa emazweni ahlukahlukene. Ngisho nomlimi oyisivande oneminyaka eminingi ekhula ekukhuleni lesi sitshalo angangena emanzini amaningi. Yini esingayisho ngamantombazane noma labo abaqalile ukuzalanisa lemifino.
Sikhula ukhukhamba efasiteleni: iseluleko esiwusizo
Kulukhuni manje ukuthola indlu lapho bekungeke kube khona izimbali-izimbali kumafasitela ewindi. Bangezela induduzo efulethini, futhi badale isimo esihle sokudala. Kodwa ukuze ukhule ekhaya awukwazi kuphela idrako, ama-violets noma i-dieffenbachia. Ukuze kuzalwe okunjalo ngisho namakhukhamba. Lokhu akuyona inqubo eyinkimbinkimbi, ikakhulukazi uma utshala izitshalo zokuhlobisa iminyaka.
Ukuphoqa ukhukhamba indlela yokwenza kahle
Yonke insimu izwile ngenqubo yokukhetha ukhukhamba nezinzuzo zayo. Ake sikhulume ngokuthi singayinikeza ukhukhamba endle nasesibamba sokushisa, nokuthi kungani ukhukhamba idinga inqubo enjalo. Indlela yokugcoba ukhukhamba onegciwane lesandulela izinambuzane Izinambuzane ezibizwa ngokuthi ukhukhamba, lapho izithelo zikhula khona kuphela lapho kutholakala impova yizinambuzane noma abantu.
Indlela yokubhekana nezifo zamakhukhamba
Yonke imifino yokulima yemifino yayibhekene nezifo nezinambuzane zezitshalo zemifino. Kuyinto eyodwa uma kwenzeka ngenxa yokunakekelwa okubi, futhi nakanjani lapho isitshalo sigula ngenxa yokuthi akukho isizathu esicacile. Lesi sihloko sizoxoxa ngendlela yokugcina ukhukhamba ezivela ezifweni nasezinambuzane. Ngokuvamile, izifo zekhukhamba zibangelwa ukunakekelwa okungafanele.
Utamatisi Jam: The Ungadliwa Best for Utamatisi
Namuhla, utamatisi uyathandwa futhi uyabonwa yizo zonke izinto zokudlela zomhlaba. Kuziphi izitsha kuphela ezingasetshenziswanga, ngokushesha nje lapho zingavunyiwe. Lezi zinhlanzi, nama-pickle, utamatisi, i-kvass ne-vyalyat. Kodwa akusiwo wonke umuntu owanambitha ukujamu kwalezi zithelo ezinhle. I-Cherry Utamatisi Jam Izithako: I-Cherry Utamatisi - U-1 kg Ushukela - 450 g I-Lemon - 1 pc.
Indlela yokuqoqa utamatisi ebusika, ezihlukahlukene zokupheka
Utamatisi olwandle luyingxenye ebalulekile yokudla kwethu. Bayajabula ukudla kanye neholide, nasetafuleni lansuku zonke. Futhi yonke inkosikazi esishisekayo inezindlela zokupheka ezithandayo ngoba utamatisi uphazamisa ebusika. Ukunambitheka kwamatamatisi ekheniwe kungaba okuhlukile - okubukhali, okumnandi, okumuncu. Konke kuxhomeke ezinuneni kanye nokuhlelwa kwenkathi okungeziwe ku-marinade.
Indlela yokubhekana nokulimaza onotamatisi, ukwelashwa utamatisi ekhishini labo lasehlobo
Uma sebethole izibonakaliso ze-phytophtoras endaweni yabo, zonke izivande ziqala ukuzwakala i-alamu. Kulesi sihloko sizoxoxa ngakho konke okuhlobene nesifo nokuthi singalwela kanjani ukulimaza ku-utamatisi ku-greenhouse nasensimini. Kuyini i-phytophtora: izimbangela nezibonakaliso zokugula Uma ungahlangabezane ne-phytophtora futhi ungazi ukuthi kuyini, cishe cishe awuzange uzame ukutshala utamatisi engadini yakho.
Izimfihlo zokukhula nokunakekela izithombo zezotamatisi
Utamatisi ungenye yemifino ethandwa kakhulu. Ngaphandle kwabo, mhlawumbe, abakwazi ukwenza nganoma yisiphi isakhiwo segadi. Imifino iyinambitha kakhulu, inkulu yokuvuna ebusika futhi inezinto eziningi eziwusizo. Ngokuvamile, izithombo ezithengiwe zingase zibe buthakathaka noma azihambisani nezinhlobonhlobo ongathanda ukuzithenga.
Utamatisi we-cherry awusizo kanjani?
Utamatisi we-Cherry ungumuthi ode, ukuvuthwa kokuqala utamatisi, ngokuvamile obomvu, nakuba izinhlobo eziphuzi, eziluhlaza futhi ezimnyama zingatholakala. Izithelo ngokuvamile zincane (10-30 g), kodwa zitholakala ubukhulu bebhola legolfu. Ukuma kuyahlukahluka kancane kancane kuya ku-spherical. Utamatisi asetshenziswa njengesidla, umhlobiso wezitsha, wengezwa kuma-saladi, ekheniwe futhi ngisho omisiwe.
Izindlela ezingavamile zokukhula ukhukhamba
Abalimi abaningi bezinsizwa bavame ukuzibuza ukuthi bangahlwanyela kanjani amajikijolo, izihlahla zezithelo nemifino endaweni encane futhi ngesikhathi esifanayo kuvuna ngokwanele isivuno. Sikunikeza izindlela ezithakazelisayo zokutshala ukhukhamba. Uyazi? Izwe lakuleli ikhukhamba elivamile yizindawo ezihlala ezishisayo nasezindaweni ezishisayo zaseNdiya, ezinyaweni ze-Himalaya, lapho zikhula khona ngezimo zemvelo.
Zijwayele izinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zamakhukhamba ebhaluni
Ungakwazi ukunambitha ukhukhamba okwenziwe ekhaya okwemnandi ngisho noma impahla ingenalo isakhiwo sezwe, noma i-dacha. Esimweni esinjalo, insindiso kuphela izoba izinhlobo zekhukhamba kubhaluni, incazelo yezinto ezithandwa kakhulu kuzo esizokwenza ngokulandelayo. Ngo-Ephreli Lokhuhlukahluka ukuvuthwa kokuqala, okwenza kube lula ukubona ezihlahleni zalesi sitshalo ama-ovaries wokuqala wezithelo zingakapheli izinyanga eziyi-1.5 emva kokuvela kwamahlumela.
Indlela yokukhulisa utamatisi kuma hydroponics
I-Hydroponics yibuchwepheshe lapho izitshalo zikhule ngaphandle kokusebenzisa inhlabathi. Ukudla kwezimpande kwenzeka emvelweni wokufakelwa. Kungaba yomoya womswakama, amanzi aphakeme kakhulu, kanye nokuqina (ukudla, ukuthungwa kwamanzi nokunyakaza). Ngale ndlela kudinga ukuchelela njalo noma okuqhubekayo kokunisela ngokusebenzisa isisombululo sokusebenza samaminerali amaminerali, okwakhiwa ngawo okuhambisana nezidingo zesitshalo esithile.
Indlela yokukhulisa ukhukhamba efasiteleni ebusika
Amakhukhamba efasiteleni ebusika - lokhu akusasekho inganekwane, kodwa iqiniso, elihlelwe ekhaya ngabagadi balimi abathandekayo. Kodwa lokhu kungenzeka kuphela uma usebenzisa izinhlobo ezikhethekile zamakhukhamba okukhula ebusika endlini futhi ulandela yonke imithetho yokuzinakekela. Izinhlobo zamakhukhamba we-window sill Ngenxa yomsebenzi ojulile wabalimi namuhla, zonke izitshalo zasemifino zingayithenga imbewu yekhukhamba ekwazi ukukhula futhi izithele izithelo ngisho nezimo zasendlini.
Indlela yokunakekela kahle i-melotriya yesitshalo noma i-mini ikhukhamba
I-Metotria iyisitshalo esivela e-Afrika, inezithelo ezidliwayo futhi iyakwazi ukuthandwa ngokwengeziwe emiphakathini yethu phakathi kwabathandi bamasiko angaphandle. Ikhukhamba encane yezinyama: incazelo yesitshalo se-Melodia isifo somndeni we-ithanga, ngezithelo ezidliwayo nemifino yezimpande. Lesi sitshalo sinama-liana-afana nesitshalo esingaphezu kwamamitha amathathu, amaqabunga abonakala njengekhukhamba, umumo wesigxathu ngezingqimba ezibukhali, kodwa ngaphandle kokukhwabanisa kwekhukhamba.
Umhlali ngamunye ehlobo uyazi kahle ukuthi uma bezitshala izitshalo ezifanayo endaweni efanako, iminyaka emibili elandelanayo, kanti ngisho nezimo ezibonakalayo zokunakekelwa, ziba nzima njalo ngonyaka kanti izithelo zibi kakhulu. Lesi simo sibangelwa ukuchithwa kwenhlabathi, okuyinto futhi, ngenxa yezizathu eziningana.
Izindlela zokugcina ukhukhamba ebusika: kanjani ukugcina ukhukhamba fresh
Amakhukhamba amasha, ama-crispy aneqoqo eligcwele lamavithamini uyohlala enqoba ngaphezu kokukhethwa kwamathanga. Ngeshwa, ngesitoreji esingalungile, ukhukhamba fresh ziqala ukubola ngokushesha kakhulu. Indlela kuphela yokuphuma ukudla imifino ngokushesha lapho kungenzeka, noma ukuthola indlela entsha yokuyigcina.